Tips News - 2/177 -
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ လူလေးလှရုံသာမက ပညာလည်းတတ်၊ အရည်အချင်းလည်းရှိတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးကတော့ ချမ်းသာတဲ့ မိဘအသိုင်းအဝိုင်းက ဆင်းသက်လာသူတစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမခြေထော်ပေါ်သူမရပ်တည်လာပြီး အောင်မြင်မှုတွေ တဖွဲဖွဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း နေခြည်ဦးက သူမကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့ ကားအသစ်ကြီးကို ဝယ်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်း Vlog အသစ်လေးကို အခုလိုပဲ ချပြလာပါတယ်။ New Year, New Car, New Adventure !!! ဒီ Vlog လေးက နေခြည့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Car Shopping Vlog လေးပေါ့နော် 🚘 အခုဝယ်မယ့်ကားက နေခြည့်ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ ပထမဦးဆုံးဝယ်မယ့် ကားလေးလည်းဖြစ်လို့ နေခြည် မှန်းထားတဲ့ Budget နဲ့ ဘယ်လိုကားမျိုးရမလဲဆိုတာလည်း အရမ်းရင်ခုန်နေတယ်။ 🥰🥰နေခြည် ငယ်ငယ်လေးထဲက ကားတွေဆို အရမ်း Crazy ဖြစ်တယ်။နေခြည် ကျောင်းသွားတက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ နေခြည်စီးဖို့ဆိုပြီး...
ကြွေရုပ်လေးတစ်ရုပ်လို နုနုရွရွလေးနဲ့ အရမ်းလှတဲ့ နန်းဆုရတီစိုးကတော့ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာရရှိထားသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ နန်းဆုရတီစိုးကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို အမြဲမပြတ်ပြုလုပ်သလို တစ်ဖက်မှာလည်း သူမရဲ့ အချစ်ရေးလေးကို သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နန်းဆုရတီစိုးကတော့ သူမရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေကို ချပြလေ့ရှိသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူလေးဆီက ဂရုစိုက်ယုယမှုတွေကို ရရှိတဲ့ နန်းဆုရတီစိုးက ဒီကနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၆) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ချစ်သူကောင်လေးအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပေးပြီး အတူတူရှိနေခဲ့ပေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နန်းဆုရတီစိုးက သူမရဲ့ချစ်သူကောင်လေးအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် PlayStation5ဂိမ်းစက်ကြီးကိုဝယ်ပေးပြီး အမှတ်တရမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖြစ်တဲ့အကြောင်း သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောလာပါတယ်။ နန်းဆုရတီစိုးကတော့ ချစ်သူကောင်လေးအတွက် တကယ့်အမိုက်စားလက်ဆောင်ကြီးကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း နန်းဆုရတီစိုးအရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူကောင်လေးကို အရမ်းသိချင်နေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ...
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် ဧဒင်အုပ်စုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်သော ဦးချစ်ခိုင်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းခွဲ လှူဒါန်း
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် ဧဒင်အုပ်စုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် လည်း ဖြစ်သော ဦးချစ်ခိုင်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းခွဲကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (နေပြည်တော်) ရှိ ကိုဗစ်19 ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေ ( နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းအမှတ်( EDC 600012 ) သို့ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။“နိုင်ငံတော်အစိုးရသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ငွေစာရင်းအကောင့်ထဲကို ဒီနေ့ပဲ ထည့်နေပါပြီ၊ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို နိုင်ငံသားတိုင်း ထိုးနှံစေချင်တယ်။ဒီကိစ္စက အရေးကြီးတယ်လေ”ဟု ဦးချစ်ခိုင်ကပြောသည်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေအတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ နေပြည်တော်တွင် ငွေစာ ရင်းဖွင့်လှစ်ပြီး ( နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းအမှတ် EDC 600012 ) တွင် နိုင်ငံတော်မှ မတည်ရန်ပုံငွေ ကျပ် ၃၃၈ ဘီလီယံခန့်နှင့်ညီမျှသော အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၅၀၊ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရရှိရေးရန် ပုံငွေ ( မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်းအမှတ် OA013733 )စာရင်းတွင်...
ပြည်သူချစ်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုပေါက်ကတော့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ အနုပညာပညာရပ်တွေကို လေ့လာဆည်းပူးပြီး နိုင်ငံကျော်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက် ဖြစ်လာသူပါ။ အနုပညာမှာလည်း ထူးချွန်သလို စိတ်သဘောထားလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ ကိုပေါက်က ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားသလို လူချစ်လူခင်ပေါများသူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ မနေ့က ဇန်နဝါရီလ (၅) ရက်နေ့က ကိုပေါက်ရဲ့ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီး ကိုပေါက်က သူ့ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။ ၄၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကို ဦးထိပ်တင်လျှက် ဘုရား တရား သံဃာ နဲ့ ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါးကိုရိုသေစွာကန်တော့ပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေက ဒီနေ့ဆ်ိုရင် လမ်းထဲမှာ စတုဒီသာ ထမင်း/ဟင်း ကျွေးပြီးခဲ့ပြီပေါ့။ ကိုဗစ်ကြောင့် လူစုဝေးရမှာကြောက်လို့ လူနည်းနည်းနဲ့ အလှူလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အမြန်လမ်း ၁၁၆မိုင် ၆ဖာလုံ ကမ္ဘာငြိမ်းအေးစေတီတစ်ထောင်ဆရာတော် စမဘုန်းဘုန်းကို ပြင်ဦးလွင် အောင်ချမ်းသာကျေးရွာအုပ်စု၊အင်သာကျေးရွာရှိ မြေ (၁)ဧက...
မြန်မာပြည်မှာ အကွက်ရိုက်ပြီး မြေကွက်ရောင်းသူတွေရဲ့ ဝယ်သူအ‌ပေါ် ဂျင်းထည့်ပုံ
တရားမဝင် မြေကွက်ရိုက်ရောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ဘူးဆိုပေမယ့် အမြတ် အရမ်းကျန်ပါတယ်။ ကိုယ်ရောင်းလိုက်တဲ့ မြေကွက်ဟာဈေးသက်သာလွန်းရင်လည်း ဝယ်သူ မယုံကြည်မှာစိုးတာကြောင့် ဝယ်သူယုံကြည်လောက်တဲ့ ဈေးအထိဈေးတင်ပြီး ရောင်းကြရပါတယ်။ အဲ့ဒါကလည်း တရားမဝင်အကွက်ရိုက်ရောင်းတဲ့ ဈေးကွက်အတွက် အမြတ်အစွန်းများစွာကို ရစေပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ တစ်ဧက သိန်း ခုနှစ်ဆယ် ရှစ်ဆယ် တစ်ရာ လောက်နဲ့ ပေးဝယ်ရတဲ့မြေဟာ အိမ်ဝိုင်းကွက်ရိုက်ပြီး ပြန်ရောင်းရင် မြေအနေအထားနဲ့ လမ်းအနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး ၁၄ ဝိုင်းကနေ ၁၆ ဝိုင်းအထိရတာဆိုတော့ တွက်လိုက်ရင် အိမ်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းစာအတွက် မြေတန်ဖိုးဟာ ခြောက်သိန်းခွဲ ခုနှစ်သိန်းလောက်ပဲ ရှိတာပါ။ အဲ့ဒါကို တစ်ဝိုင်း ဆယ်သိန်းလောက်နဲ့ ပြန်ရောင်းတယ်ဆိုရင် ဝယ်သူတွေအတွက် ဈေးချိုလွန်းတယ် ဟုတ်မှ ဟုတ်ပမလားဆိုပြီးတော့ သံသယဝင်စရာ ဖြစ်လာပါမယ်။ မယုံကြည်တော့ပါဘူး။ အဲ့ဒိတော့ ဝယ်တဲ့သူတွေ ယုံကြည်အောင် သိန်း နှစ်ဆယ် အစိတ် သုံးဆယ် လေးဆယ်...
Hong Yun အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်သား ၃၀၀ ကျော် နစ်နာကြေး ကျပ်သိန်း ၂၀၀၀ ကျော်ရရှိ
ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ထဲမှာ တည်ရှိတဲ့ Hong Yun အထည်ချုပ်စက်ရုံကို ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကာ အလုပ်သမား ၃၀၀ ကျော်အတွက် နစ်နာကြေး ကျပ်သိန်း ၂၀၀၀ ကျော် ရရှိအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်(FGWM)က သိရပါတယ်။ အဆိုပါစက်ရုံဟာ တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင် လုပ်ငန်းတခုဖြစ်ကာ လည်ပတ်တဲ့ကာလ တနှစ်မပြည့်ခင် လပိုင်းလောက်မှာပဲ ရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့မှာတော့ စက်ရုံကို အပြီးပိတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းနဲ့ အလုပ်သမားတွေဘက်ကလည်း စက်ရုံအပြီးပိတ်ပါက အလုပ်ထုတ်နစ်နာကြေးပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုရာမှာ အလုပ်ရှင်က မပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောခဲ့တဲ့အတွက် ရွှေပြည်သာ FGWM အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ စည်းရုံးရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ စည်းရုံးရေးမှူးတွေက အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား၊ အစိုးရ သုံးပွင့်ဆိုင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှာတော့ အဆိုပါ စက်ရုံအလုပ်သမား ၃၄၅ ယောက်အတွက် နစ်နာကြေး...
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောရွှေစင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေကာ ချစ်စရာအပြုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝ အညွှန့်တုံးသွားမှာမလိုလားလို့ ချိမ့်ကေကိုအပေါ်စွဲဆိုထားတဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မကို သက်ညှာစွာပြင်ဆင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ သူမကတော့ “ဒီနေ့ ဇင့်ရဲ့ အလုပ်ကိစ္စ တွေ အရာရာအဆင်ပြေ လို့ ပျော်ရွှင်ရပေမယ့်မနက်ကတည်းက ကြားရတဲ့သတင်းကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် ချိမ့်ကေကို လာပြီးအဖမ်းခံလိုက်တယ်တဲ့ တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ ပုဒ်မကလဲ ၂၅ ဆိုတော့ အံသြမိသွားရတယ်မထင်မိဘူးလေ ဥပဒေ ဆိုတာကိုတော့ နားလည်ပါတယ်လူတိုင်းအမှားနဲ့မကင်းကျပါဘူး သိ့လိုပဲ လုပ်တဲ့အမှားဖြစ်စေ မသိ့လို့ပဲ လုပ်တဲ့အမှားပင်ဖြစ်စေဥပဒေနဲ့ငြိ့စွန်းရင် ဥပဒေနဲ့အညီ အပစ်ပေးခံရမယ်ဆိုတာတော့ လက်ခံပါတယ် ဒါပေမယ့် ချိမ့်ကေကို စွဲလိုက်တဲ့ ပုဒ်မ က အာမခံ လို့မရတဲ့ ပုဒ်မ၂၅ အစား ပုဒ်မ ၃၀လောက်မဖြစ်သင့်ဘူးလားတွေးမိတယ် ဘယ်သူဘယ်သူကိုမှ ပုတ်ခတ် မပြောလိုသလို မထိ့ခိုက်စေချင်ပါဘူးချိမ့်ကေကို...
နိုင်ငံကျော် အကယ်ဒမီ မင်းသမီးကြီး ခင်ဇာခြည်ကျော်ရဲ့ သားအကြီးဖြစ်သူ ဘုန်းမင်းနေလကတော့ အကယ်ဒမီရွှေကြိုမောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက် ပရိသတ်တွေရဲ့ သတိထားအားပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းမင်းနေလကတော့ အခုဆိုရင် အသက် (၁၈) နှစ် ကျော်အရွယ်သာရှိသေးပေမယ့် အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေပြီး ကြော်ငြာတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းမင်းနေလက အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်လာတာနဲ့အမျှ သူတို့မောင်နှမကို Single Mother တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ကျွေးမွေးလာခဲ့တဲ့ မိခင် ခင်ဇာခြည်ကျော်ကိုလည်း ပြန်လည်ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်အပေါ် သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ဘုန်းမင်းနေလက သူ့ရဲ့ ဖခင်နဲ့ အတူတူမနေပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ဘုန်းမင်းနေလက သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရဘွဲ့တံဆိပ်ကို ရရှိသွားခဲ့တဲ့ ဖခင်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း Congratulation Dad.. Good For You eh? ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်...